ကနောင်သားလေး: စင်ရော်မောင်မောင် - ဥက္ကဌအသစ်နဲ့ အမှုဆောင် အဖွဲ့က မှန်မှန်ကန်ကန်မျှမျှတတ လုပ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်
စင်ရော်မောင်မောင် - ဥက္ကဌအသစ်နဲ့ အမှုဆောင် အဖွဲ့က မှန်မှန်ကန်ကန်မျှမျှတတ လုပ်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအ ရုံး ဥက္ကဌ ဦးဇင်ဝိုင်း ကျန်းမာရေး ကြောင့် အနားယူသွားတဲ့အခါ ဒါ ရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင်က သူ့ရဲ့်ခေနဘသသု စာမျက်နှာထက်Warmly welcome to changing about film organization chair man post! I never forgot about last year academy! This is historical big mistake လို့ ရေးခဲ့ပါတယ်။ ဥက္ကဌနေရာ အ ပြောင်းအလဲနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူ့ အမြင်ကို မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန် တော်တို့ ရုပ်ရှင်လောကကြီးအကူး အပြောင်းဖြစ်နေသလို တိုင်းပြည် လည်း အကူးအပြောင်းဖြစ်နေပြီ။ တိုင်းသူပြည်သားတွေအနေနဲ့ ဖြစ် သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို အနုပညာသ မားတစ်ယောက်အနေနဲ့ တင်ပြခွင့် ရှိတယ်။ ကျွန်တော်အနုပညာလော ကမှာ ၁၉၈၄ ခုနှစ်ကစပြီး လုပ် လာခဲ့တာ။
ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံ အရ ကားတွေ အများကြီးရိုက်ခဲ့ ဖူးတယ်။ ခုပြောင်းလိုက်တဲ့ ကို လူမင်းကိုလည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။ ခုဥက္ကဌနဲ့ အမှု ဆောင်အဖွဲ့က တကယ်ကိုပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်မယ်လို့ယုံ ကြည်တယ်။ နိုင်ငံခြားသွားတဲ့ ခရီး စဉ်တွေထဲမှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သူတွေ အများကြီး၊ နိုင်ငံတကာ လုပ်နေတဲ့ ထုတ်လုပ်သူတွေ၊ သရုပ်ဆောင် တွေထဲမှာ အခေါက်ခေါက်အခါခါ သွားတာတောင်မပါတဲ့ သူတွေရှိ တယ်။ တချို့ကျတော့လည်း မဆိုင် တဲ့ သူတွေပါတယ်။ရုပ်ရှင်အစည်းအ ရုံးကရတဲ့ Fun တွေဆုံးရှုံးခဲ့တယ်။ ဒါမျိုးတွေမဖြစ်စေချင်ဘူး။
အခု တက်တဲ့ ဥက္ကဌသစ်နဲ့ အမှုဆောင် အဖွဲ့ကြီးက ရုပ်ရှင်လောကသား တွေအတွက် တကယ်ကို ဓမ္မဓိဌာန် ကျကျနဲ့ မျှမျှတတအနုပညာသက် သက် နိုင်ငံရေးမပါဘဲ၊ ဘေးအယူ ၀ါဒ၊ မူဝါဒတွေမပါဘဲ အဖွဲ့ဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ တက်တက်ကြွကြွနဲ့ အလုပ်လုပ်မှာပါ။ အစည်း အရုံး ဥက္ကဌဟောင်းလက်ထက်က တော့ အလုပ်တွေ အကုန်နားပစ် တာ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တာပါနားလိုက် တယ်။ သူလည်းအနားယူသွားပြီ ဆိုတော့ ထပ်ပြီးဘာမှ မဝေဖန်ချင် တော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်နဲ့ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက်တွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ ခုလက်ရှိ အနာဂတ်ပဲသွားမယ်။
ရုပ် ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဌအနေနဲ့လည်း ၀င်အရွေးခံဖို့ မရှိပါဘူး။ တကယ် မှန်မှန်ကန်ကန်မျှမျှတတနဲ့လုပ်မယ် ဆိုရင် ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအလံ တော်အောက်ကို ၀င်ဖို့ အဆင်အ သင့်ပဲ။ ခုရုပ်ရှင်လုပ်ငန်းကြီးပြန် လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါ ]]မြတ်နိုးချစ်ခင် တမ်းတရပါသော အမိတက္ကသိုလ်}} ရန်ကုန် ၀ိဇ္ဇာသိပ္ပံတက္ကသိုလ်ကို အခြေခံပြီး ဇာတ်လမ်း တွဲရိုက်ပါမယ်။ သရုပ်ဆောင်ကို အစအဆုံးပြန်ရွေးမှာပါ။
အသစ် ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်မယ်။ လုပ်နေတဲ့ သူတွေလည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ ကျွန်တော့်ကို အနုပညာအရ အချိန် ပေးလုပ်နိုင်တဲ့သူနဲ့ ရိုက်မယ်။ ကိုယ် တိုင်ပိုက်ဆံထုတ်ရိုက်ပြီး ရုပ်သံလိုင်း တစ်လိုင်းကို ရောင်းမယ်။ ဘယ် လိုင်းကို ရောင်းဖြစ်မလဲမသိဘူး။ ကြိုက်တဲ့ လိုင်းက ၀ယ်ပေါ့။ ၀တ္ထု ဇာတ်ညွှန်း ဒါရိုက်တာ စင်ရော် မောင်မောင်ပါ။
ရှာဖွေတင်ပြရေးသားသူ ကနောင်သားလေး တင်ပြချိန် 5:39 AM